Misela ukuba ngaba ikhompyuter yakho ingazitshisa iiCD kunye neeDVD
Ngaphambi kokubhalela iCD okanye iDVD, kuya kufuneka ugqibe ukuba ikhompyuter yakho ingazitshisa iiCD neeDVD. Ukufumanisa ukuba ikhompyuter yakho ingazitshisa iiCD neeDVD, jonga oonobumba RW kwigama le icon yedrive.
azo uti iziphumo ebezingalindelekanga
Uninzi lweekhompyuter namhlanje zingabhala ulwazi kwiCD nakwiDVD zisebenzisa indlela eyaziwa njenge ukutshisa . Ukubona ukuba unamathele kwi-drive endala engakwaziyo ukutshisa iidiski, susa naziphi na iidiski ngaphakathi kwedrive; emva koko uvule ifolda yekhompyuter yam kwaye ujonge i icon kwiCD yakho okanye kwiDVD drive. Ufuna ukubona iileta RW kwigama le icon yedrive.
Ukuba idrive ithiIDVD / iCD-RW, inokudlala kwaye bhalela iiCD udlale kodwa hayi bhalela iiDVD.
ungathatha i-tylenol nge-cephalexin
Ukuba idrayivu yakho ithiIDVD-RW Qhuba, ubethe iJackpot: Idrive yakho ingafunda kwaye ibhalele iiCD kwaye IiDVD.
IVista yinguqulelo yokuqala yeWindows ekwaziyo ukubhala kwiiDVD, into engenakenziwa yiWindows XP ngaphandle koncedo lwenkqubo yomntu wesithathu.
Ukuba i-PC yakho inezixhobo ezitshisa ii-CD okanye ii-DVD ezimbini, xelela iVista ukuba yeyiphi na eqhuba ukusingatha umsebenzi ovuthayo: Cofa ekunene kwi-drive, ukhethe iiProperties, kwaye ucofe ithebhu erekhodayo. Emva koko khetha idrive oyithandayo kwibhokisi ephezulu.
ixabisa malini ipakethe ye-az
yintoni oza nayo kwi-gre
ndingayithatha i-benadryl nge-loratadine
indlela ekude ngayo windows windows 10
I-cipro idosi yosulelo lomchamo
Uxinzelelo phantsi kwembambo yasekunene